Maxaa guuldarada Maraykanka ee Corona sababay? – Idil News
Maxaa guuldarada Maraykanka ee Corona sababay?
Posted By: Idil News Staff April 2, 2020
Wax ka badan labo bilood ayaa ka soo wareegatay markii kiiskii ugu horreeyay ee fayraska corona laga helay Mareykanka. Tan iyo wixii intaa ka dambeeyay, fayraska ayaa ku faafay gudaha dalkaas, iyadoo kiisaska guud ay kor u dhaafeen 200,000, halka tirada dhimashaduna ay gaartay 5,000.
Kuuriyada Koonfureed waa dalka hanaanka ugu wanaagsan u maray baaritaanka
Guul darrada dhanka kala fogaanshaha bulshada.